Kụziri ụmụaka ka koodu dị bụ ebumnuche nke Project Bloks | Gam akporosis
Google's Project Blocks bụ ụzọ ọhụrụ iji kụziere ụmụaka itinye koodu
Google bụ ụlọ ọrụ na - enwekarị ndị na - agba ya na ndị na - asọpụrụ ya, mana maka ụfọdụ ebumnuche ọ na - enwe ike ịdọta uche ọtụtụ mmadụ mgbe ọ nwere ike imeziwanye ụwa gburugburu anyị dịka ndị ahụ ọhụrụ google ụwa map. Ọ bụ na nkuzi ebe o siri ike ịkatọ ya mgbe ọ na-ebupụta aro ga-enyere aka melite ihe ọmụma na nka nke ụmụntakịrị, dịka ọ dị n'ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ya.
Taa Google kwuputara mmekorita ohuru ya na Paulo Blikstein nke Mahadum Stanford na IDEO weputara Project Bloks, a emeghe ngwaike n'elu ikpo okwu iji mepụta ahụmịhe mmemme na ihe mgbochi "anụ ahụ" nke ga-eme ka nkuzi nke ụmụntakịrị ka mma n'okwu a. A ga-ahụ mmemme ịkụzi ihe n'ụzọ dị iche na ọrụ a na-adọrọ mmasị.
Na echiche maka okike Project Bloks, Google dabere na ịdị irè nke ịnwale usoro mmụta ikwado nweta mmemme nke ụmụaka. Maka nkwekọrịta ọhụrụ a, Google họọrọ ịmepụta nyiwe mepere emepe ka ndị na-emepụta ihe, ndị mmepe na ndị nyocha wee nwee ike ịmepụta ihe na nnwale na ngwaọrụ kọmputa maka ụmụaka.
Ebumnuche nke Bloks nke etinyere mebere atọ. Enwere «Brain Board» kere na Rasberi Pi Zero nke bụ isi nhazi unit. Ndị «Brain Board» na-enye ike na sistemụ ndị e wuru ma nwee API nwere ike izipu ma nata data site n'akụkụ ndị ọzọ. Nke a "Brain Board" nwekwara ike izipu ntuziaka na ngwaọrụ ndị ọzọ mgbe ị na-eji Wi-Fi ma ọ bụ Bluetooth ka ụmụaka wee hụ nsonaazụ nke mmemme ha.
E nwekwara mpempe ndị ọzọ akpọrọ «Base Board» nke ị nwere ike ịchọta Ọkụ iji nye nzaghachi na ozugbo. O nwekwara ihe mmetụta capacitive nke a na-eji dị ka okporo ụzọ maka iwu site na nke atọ na nke ikpeazụ, "Puck." Enwere ike ịhazi Pucks na ntuziaka dị iche iche dịka "ịwụ elu" ma ọ bụ "gaa aka ekpe". Ndị mmepe na ndị na-emepụta ihe ga-enwe ike ịmepụta Pucks n'ụdị dị iche iche iji nyere ụmụaka aka ịghọta ọrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google's Project Blocks bụ ụzọ ọhụrụ iji kụziere ụmụaka itinye koodu
Okenye Swim Keyboard bu ihe omuma di nma maka ndi na-egwu TV
Google na - emelite onyonyo satịlaịtị n’elu ụwa iji mee ka ha dị nkọ ma nwekwuo ọmarịcha